Golaha Guud ee UNWTO Marooko: Sir wali lama soo bandhigin?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Golaha Guud ee UNWTO Marooko: Sir wali lama soo bandhigin?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Moroko News • Wararka Spain • Dalxiiska
SEGOVIA, SPAIN - MARCH 26: Xoghayaha guud ee Ururka Dalxiiska Adduunka, Zurab Pololikashvili, ayaa lagu arkay falkii furitaanka ee Madasha WTO bishii Maarso 26, 2019 ee Segovia, Spain. (Sawirka Nacho Valverde/Europa Press iyada oo loo marayo Getty Images)
UNWTO waxay isu diyaarinaysay shirkii 24aad ee Golaha Guud ee Marooko.
Ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay eTurboNews, GAan dib ayaa loo dhigay, laakiin muxuu xoghayaha guud Zurab Pololikashvili tan u qarinaya sida sirta ilaa iyo hada, isagoon u sheegin wadamada xubnaha ka ah UNWTO?
Warar xan ah oo laga helay ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili uu go’aansaday dib u dhigista 2021 2Shirweynihii 4aad ee guud ee hadda loo qorsheeyay Morocco.
Morrocco oo ah masuulka martida loo yahay waa inay xiiso uqabtaa taariikho cusub oo loogu talagalay dhacdada UNWTO si looga fogaado isku dhacyada horumarka COVID-19.
Maxaa xubnaha UNWTO weli loogu wargalin waayey?
Golaha guud ee UNWTO, ayaa lagu qabtay Marrakech, waxay noqon doontaa dhacdadii ugu horeysay ee heer caalami ah oo heer caalami ah tan iyo markii COVID-19 ay dunida ku xirtay qufulka. Tani waxay ahayd wararka qaranka ee Caalamka markii Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvil dib loo doortay bishii Janaayo ee sanadkan.
Waqtigii doorashadii Zurab ee Janaayo ee Spain waxay soo martay musiibo qaran sababtoo ah cimilada qabow oo ay weheliso qufulid sababtoo ah kororka khatarta ah ee kiisaska COVID.
Laba xoghaye guud ee hore ee UNWTO ayaa ku booriyay Zurab inay dib u dhigto doorashada bisha Janaayo nabadgelyada musharixiinta, si loogu ogolaado wufuudda inay ka soo qayb galaan, iyo gaar ahaan kuwa kale inay soo galaan tartanka.
Waxay u muuqatay in kani yahay kii ugu dambeeyay ee maskaxda SG waqtigaas oo u hanqal taagaya inuu ku guuleysto dib-u-doorashadiisa isagoo adeegsanaya waqtiga, inkasta oo waxay si cad u ixtiraamtay Baxrayn.
Bishii Febraayo Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili wuxuu hogaaminayay wafdiga UNWTO wuxuuna booqday Morocco si uu ugala hadlo faahfaahinta kulanka sharci ee soo socda ee diiradda la saarayo Waxbarashada iyo Dhallinyarada, Horumarinta Reer Miyiga, iyo Innovation Digital, iyo Golaha Guud
Wasiirka Dalxiiska Marooko Nadia Fettah Alaoui, oo wehelisay weftiga booqashada saddexda maalmood ah, waxay muujisay sida ay Morocco uga go'an tahay martigelinta Golaha Guud ee "taarikhiga ah". Waxay sidoo kale carabka ku adkeysay muhiimada ay leedahay in dib loo soo nooleeyo dalxiiskii caalamiga ahaa iyadoo loo marayo hab nabdoon oo waara.
Reer Marooko waaxda dalxiiska, oo lumiyay $ 4.77 bilyan (MAD 42.4 bilyan) sanadka 2020 sababo la xiriira xayiraadaha safarka ee la xiriira COVID-19, ayaa raadineysa qaab lagu siiyo waddanka kobcin dhaqaale adduunyada musiibada ka dib.
Marooko 37.5 milyan.
Waqtigaan la joogo, Marooko, oo ah dal ku yaal Waqooyiga Afrika ayaa kaalinta 124 adduunka kaga jira kiisaska COVID19. Marooko waa 110 iyadoo 251 qof ay u dhintaan halkii milyan,
Marka la barbardhigo, Spain waxay leedahay darajo 38 kiisaska, iyo 25 dhimashada.
Haddii dib-u-dhigista Golaha Guud la xaqiijiyo, waxay muujineysaa Moroccos ballan-qaad dhab ah oo ku aaddan dalxiiska adduunka iyo ilaalinta meerahan. Waxay sidoo kale muujineysaa sida ay uga go'an tahay in lala wadaago mas'uuliyadda dib u dhiska dalxiiska adduunka, oo aan ahayn dhowr ka mid ah oo ka qayb geli kara Golaha Guud waqtiyada hadda la joogo.